cellotta HeLa jedhamani kan qallamu semayawi Hoechst jedhamun DNAf jedhani dibbaman. Cellotni jiddu fi mirgaatti argaman interphase irra jirrani kanafu nucleusiin isaani "labeled" ta'erra. Cellin bitta irratti argamu "processa" qoqqodama nucleusii mitosis jedhamu kan chromosomeotni gargar ba'an itti bekkamu danda'anni dha
Fakki celli bineensotta, kan kessa celli agarsisu. Organelleotta: (1) nucleolus (2) nucleus (3) ribosome (4) vesicle (5) rough endoplasmic reticulum (ER) (6) Golgi apparatus (7) Cytoskeleton (8) smooth ER (9) mitochondria (10) vacuole (11) cytoplasm (12) lysosome (13) centriole
Cell biology kessatti, nucleus (plural nuclei; Latin irra Template:''nucleus'' or Template:''nuculeus'', kernel) organelle membraneniin marfamee argamu yoo ta’u kan itti argamus eukaryotic cells bayye kessa. Nucleusiin genetic material DNA molecule irra midhafamani kan protein akka histone wajjin walitti xaxamani chromosome jedhamani ofii kessa qaba. Geneotni chromosome kessatti argaman nuclear genome celli kessatti argaman jalatti argamu. The function of the nucleus is to maintain the integrity of these genes and to control the activities of the cell by regulating gene expression.
Kuttalle nucleus bekkamo ta’an nuclear envelope fi nuclear lamina dha. Nuclear envelopen membrane daballata (membrane lama) kan organelleotta hunda ofii kessatti marsee, wantotta nucleus kessatti argaman kan cytoplasm irra gargar bassu dha. Nuclear laminan immo waan walitti xaxame yoo ta’u jabbena akkumma cytoskeleton celli kennu innillen nucleus kenna. Nuclear membranen moleculotta bayye waan hin dabarsineef (impermeable membrane waan ta’ef) demma moleculotta nucleus fi cytoplasma jiddu akka jirrattu urran nucleus (nuclear pore)n jirrachun barbachisaa. Urrotni kuni membreni lachu kessa waan dabranif akka dandii moleculotta diddiqo fi ionotta ta’e tajajilla gudda kenna. Demma moleculotta guggudo akka protein jirran geggesuf egganoon kan godhamu yoo ta’u, active transportiin carrier proteiniin geggefamu jirrachu qaba. Nuclear transportiin hojja cellif bayye barbachisaa dha, kunis sababa demman urra kessani godhamu “gene expression” fi “chromosomal maintenance”ii waan qarqaruf.
Waantotti cell kessatti argaman membren qabachu battanulle, kessi nucleus gossa tokko mitti. Nucleusiin wantotta diddiqo ‘subnuclear’ ta’an qaba, wantotti kun immo protein, moleculotta RNA fi kutta DNA garagara ta’e ofii kessa qabani. Kaneen kessa kan bekkama ta’e nucleolus dha, kunnis bayyinan ribosome midhagsu irratti tajajilla. Ergaa nucleolus kessatti midhafamani bodda, ribosomotni gara cytoplasmatti dhaqanni mRNA jijjiru.
Wikimedia Commons on Cell nucleus
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Cell_nucleus&oldid=27572" irraa kan fudhatame
Last edited on 19 Bitootessa 2015, at 11:37
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 19 Bitootessa 2015, sa'aa 11:37 irratti.